Galmudug oo tallaabooyin u qaadaysa joojinta colaad beeleedyada. | Somali National Television - sntv.so
Home BENAADIR GALMUDUG Galmudug oo tallaabooyin u qaadaysa joojinta colaad beeleedyada.
Galmudug oo tallaabooyin u qaadaysa joojinta colaad beeleedyada.
Madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta ku wajahan deegaanka Xananbuure ee waqooyiga Gobolka Galgaduud, halkaas oo in muddo ah ay ka taagneed colaad u dhaxaysa beelo walaalo ah oo halkaasi wada daga.
Wax-garadka labada dhinac, Xildhibaano ka tirsan Galmudug iyo mas’uuliyiin kale ayaa wafdiga madaxweyne Qoorqoor ku wehliya socdaalka, waxaana qorshuhu yahay in xal dhammaystiran laga gaaro colaadda halkaasi ka jirtay.
Shalay ayaa deegaankaasi laga hirgaliyey heshiis xabad joojin ah, ka dib dadaallo ay sameeyeen odayaasha dhaqanka iyo ciidamada qaybta 21-aad ee xoogga dalka, Booliska Federaalka ee gobolkaas ka hawlgala iyo ciidanka nabad sugidda.
Previous articleMuwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay South Africa.
Next articleCiidamada Danab oo khaarajiyay Horjoogihii Jubbada hoose u qaabilsanaa kooxda Al-shabaab.